China CE အမှတ်တံဆိပ်ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး တည်း အသုံးပြု၍ မရသောမမြည်သောအရသာမရှိသောအဘယ်သူမျှမ irritation3Ply Medical မျက်နှာမျက်နှာဖုံးစက်ရုံနှင့်ပေးသွင်းသူများ | Xinyuanjiaye
M1013 လက်ကိုင်အိတ်မြင့် ...
ဖယ်ရှားနိုင်သောဖုန်ထူ Protec ...
CE ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး တည်း ...
CE ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး တည်းသုံးနိုင်သောအ ၀ တ်မပါသောအရသာမရှိသောအမျက်ဒေါသမရှိ3Ply Medical မျက်နှာဖုံး
1. 3-ply Non -woven အရသာမရှိ, အဘယ်သူမျှမယားယံ
2. မြင့်မားသော filtration နှင့်အသက်ရှုရန်လွယ်ကူသည်
၅။ BFE (ဘက်တီးရီးယားသန့်စင်မှုစွမ်းအား)> ၉၅%
Non- ယက်နှင့် Meltblown
YY / T က 0969-2013
ဆေးရုံ၊ သွားဘက်၊ သန့်ရှင်းသောအခန်း၊
ခြောက်သွေ့သော၊ စိုထိုင်းဆကို ၈၀% အောက်၊ လေဝင်လေထွက်ကောင်းသော၊ အလိုမရှိသောဓာတ်ငွေ့သိုလှောင်ရုံတွင်သိုလှောင်ထားပါ
ယက်မဟုတ်သောအထည်များသည်အစိုဓာတ်ထိန်းနိုင်ခြင်း၊ ရှင်သန်နိုင်စွမ်း၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိခြင်း၊ ပေါ့ပါး။ မလောင်ကျွမ်းနိုင်သော၊ ပျက်စီးလွယ်လွယ်သော၊
စိတ်တိုခြင်းမရှိသော၊ အရောင်ကြွယ်ဝသော၊ ရေစိုခံနိုင်ပြီး၊
အရည်ပျော်သောအထည် filter filter ကိုကျပန်းဖြန့်ဝေပြီးအတူတကွလိုက်ဖက်သည့် polypropylene microfibres များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ပစ္စည်း၏အသွင်အပြင်အဖြူ, ပြားချပ်ချပ်နှင့်ပျော့ပျောင်းသည်။ ပစ္စည်းဖိုက်ဘာ၏အချော 0.5-1.0 μအမ်ဖြစ်ပါတယ်, ထိုဖိုင်ဘာ၏ကျပန်းဖြန့်ဖြူးအမျှင်များအကြားအပူ bonding များအတွက်ပိုပြီးအခွင့်အလမ်းများကိုပေးစွမ်းသည်။ ထို့ကြောင့်, အရည်ပျော်လွဓာတ်ငွေ့ filter ကိုပစ္စည်းပိုကြီးတဲ့တိကျတဲ့မျက်နှာပြင်areaရိယာနှင့်ပိုမိုမြင့်မား porosity (≥ 75%) ရှိပါတယ်။ မြင့်မားသောဖိအား electret စစ်ထုတ်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ပြီးနောက်ကုန်ပစ္စည်းသည်ခံနိုင်ရည်နိမ့်ခြင်း၊ ထိရောက်မှုမြင့်မားခြင်းနှင့်ဖုန်မှုန့်စွမ်းရည်၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်
သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးကျန်းမာသောမျက်နှာနှင့်သင့်တော်ပြီး ၀ တ်ဆင်သည့်အခါမတည့်ပါ။
တစ်ခါသုံးအကာအကွယ်မျက်နှာဖုံးများ- စွန့်ပစ်နိုင်သောအကာအကွယ်မျက်နှာဖုံးများကိုအများအားဖြင့်ရက်ကန်းသားမဟုတ်သောအထည် ၂ မှ ၃ အလွှာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ စွန့်ပစ်နိုင်သောအကာအကွယ်ပေးသောမျက်နှာဖုံးများသည်အဓိကအားဖြင့်ဖုန်မှုန့်ဒဏ်ခံနိုင်ပြီး granular အရာဝတ္ထုများကိုစစ်ထုတ်သည်။
တစ်ခါသုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်နှာဖုံးများ- တစ်ခါသုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်နှာဖုံးများသည်အလွှာ ၃ ခုပါ ၀ င်သည်။ ရက်ကန်း၊ ချည်၊ အမှုန်များစသည်ဖြင့်ထိရောက်စွာစစ်ထုတ်နိုင်သည်။ ပိုကောင်းတဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
KN95 အကာအကွယ်မျက်နှာဖုံးများKN95 မျက်နှာဖုံးသည်ယေဘုယျအားဖြင့် ၄ မှ ၅ အထိအလွှာများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်၊ ၎င်းသည်ရက်မဟုတ်သောအထည်နှင့် ၁ မှ ၂ အရည်ပျော်သောအထည်ဖြစ်သည်။ ဖုန်မှုန့်မျက်နှာဖုံးသည်အရေပြားကိုနာကျင်စေမှုမရှိစေဘဲ Allergenic မဖြစ်စေရပါ။ filter filter သည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမထိခိုက်စေပါ။ အမှုန်အချင်းသည် ၅ မိုက်ခရွန်ထက်နည်းရမည်။ ဖုန်မှုန့်ဖိအားသည် ၉၅% ထက်ပိုရမည်။ ၎င်းတို့အနက် ၉၅% ၏တန်ဖိုးသည်ပျမ်းမျှတန်ဖိုးမဟုတ်ဘဲအနိမ့်ဆုံးတန်ဖိုးဖြစ်သောကြောင့်အမှန်တကယ်ထုတ်ကုန်များ၏ပျမ်းမျှတန်ဖိုးကို ၉၉% အထက်တွင်သာသတ်မှတ်သည်။
FFP3 ၉၉% ကိုထိရောက်စွာစစ်ထုတ်သည်။ FFP2 95% နှင့် FFP1 80% ~ 90% ။ အန္တရာယ်ရှိသောအရာဝတ္ထုများ၏အချင်းသည် ၆၀-၄၀၀nm ခန့်ရှိပြီးမျက်နှာဖုံးသည်ပိုကြီးသောအမှုန်များကိုမဖြတ်နိုင်သဖြင့်၎င်းသည်အန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းများကိုထိရောက်စွာပိတ်ဆို့နိုင်သည်။
နောက်တစ်ခု: ဖယ်ရှား။ ဖုန်ခံနိုင်သောအကာအကွယ်ပေးရှူရှိုက်မှု KN95 Face Mask
အရည်အသွေးမြင့်မားသောအမျိုးအစားများစွာအသုံးပြုသည်ကလေးများ3ply ကလေးများနှင့် ...
ဖယ်ရှားနိုင်သောဖုန်ထူထူအကာအကွယ်အသက်ရှူ KN95 ...